दीपेन्द्रले डेढ मिनेटमै सबलाई सखाप पारे : दरबार हत्याकान्डबारे प्रत्यक्षदर्शीको अडियो बयान सुन्ने कि ! – MySansar
दीपेन्द्रले डेढ मिनेटमै सबलाई सखाप पारे : दरबार हत्याकान्डबारे प्रत्यक्षदर्शीको अडियो बयान सुन्ने कि !
Posted on June 3, 2017 June 3, 2017 by Salokya
दरबार हत्याकान्ड भएको एक सातामात्रै भएको थियो। अनेक हल्ला चलेका थिए बजारमा। राष्ट्रिय मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको समेत चासो बनेको थियो नेपाल। विदेशी पत्रकारहरुले डेरा जमाएका थिए नेपालमा। नकारात्मक नै सही यो घटनाले नेपालको नाम पहिलो पटक विश्वमा सुन्नेहरु समेत धेरै थिए।
यही बेला उक्त हत्याकान्डको प्रत्यक्षदर्शी डा. राजीव शाहीले छाउनीमा पत्रकार सम्मेलन गरे। उनले खासगरी विदेशी मिडियालाई लक्षित गरी स्केचसमेत बनाएर अङ्ग्रेजीमा दरबार हत्याकान्ड कसरी भयो भन्नेबारे विस्तृत विवरण दिए। उनका अनुसार दीपेन्द्रले वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने गरी गोली चलाउन डेढ मिनेट पनि समय लगाएनन्। त्यतिबेला अहिलेको जस्तो धेरै अनलाइनहरु थिएनन्। नेपालन्युजले त्यसबेला शाहीको अडियोसहितको समाचार दिएको थियो। आज हार्डडिस्कमा पुराना फाइल खोज्ने क्रममा त्यतिबेलाको अडियो पनि भेटियो। सुन्नुस् हत्याका प्रत्यक्षदर्शीको अडियो बयान।
सुन्नुस् अडियो युट्युबमा (यहाँ क्लिक गर्नुस् सुन्नका लागि)
यो त्यतिबेला सिएनएनले राखेको स्केच।
डा. राजीव शाहीले त्यतिबेला पत्रकार सम्मेलनमा बनाएको स्केच।
3 thoughts on “दीपेन्द्रले डेढ मिनेटमै सबलाई सखाप पारे : दरबार हत्याकान्डबारे प्रत्यक्षदर्शीको अडियो बयान सुन्ने कि !”
एस्लाई पनि छानबिन गर्नु पर्छ ! पहिले देखि नै संकास्पद छ यो शाही भन्ने मान्छे . येत्रो ठुलो दुर्घटना हुदा हासी हासी मिडिया मा बयान ?? एसको बोलि मा अलिकति पनि दुखित लबज छैन !
यो मान्छेको कुरा विश्वासनीय छैन जस्तो लाग्यो| यसको डाक्टरको लाईसेन्स र एनएमसीको प्रक्रिया साथै कसरि पास गर्यो चेक गरे अझ पाटो खुल्ने थियो|
Tyasto tanaw purna environment ma yo manxeko dimaagma nakxa kasari basyo???